Abu Dhabi ilaa Baku: A ugu horeysay Duulista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Abu Dhabi ilaa Baku: A ugu horeysay Duulista
Airlines • Airport • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • War-Saxaafadeed • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Shirkadda Etihad Airways ayaa billowday duulimaadyadii ugu horreeyay ee abid la qorsheeyay ee isku xiraya Abu Dhabi iyo Baku.
Duulimaadkii ugu horreeyay, EY297, wuxuu ka ambabaxay Abu Dhabi shalay isagoo wata wafdi gaar ah oo ay ka mid yihiin diblomaasiyiin, marti sharaf, wakiillo warbaahineed, iyo xubno sare oo ka tirsan kooxda maareynta Etihad Airways. Markii ay timid Baku, diyaaradda waxaa lagu soo dhoweeyay salaanta madadaalada biyaha, oo ay ku xigtay soo-bandhigidda calanka Imaaraatiga iyo Azerbaijani ee daaqadaha qolka.
Peter Baumgartner, Madaxa Fulinta ee Etihad Airways, ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan bilowno duulimaadyo qorshaysan oo u dhexeeya Abu Dhabi iyo Baku, oo ah adeegga kaliya ee jadwalka u ah isku xidhka labada caasimadood. Waxaa jira dalab xoog leh oo ka imanaya labada suuq ee hawlgal toos ah, oo adeeg buuxa oo wadada ah, waana ka jawaabnay shuruuddan macmiil ee sii kordhaysa. Duulimaadyada cusubi waxay sii kordhin doonaan taraafikada Imaaraatka waxayna xoojin doonaan xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya labada qaran.
"Barnaamijka ka dhaafida fiisaha ee ay Azerbaijan u soo bandhigtay muwaadiniinta Imaaraatka sanadkii 2015 wuxuu si weyn u kiciyay xiisaha dalka, taasoo keentay in booqdayaashu aad u bateen tan iyo markii la hirgaliyay."
Etihad Airways iyo Azerbaijan Airlines ayaa dhawaan shaaciyay iskaashi codeshare ah kaas oo hada arka Azerbaijan Airlines oo dhigaysa lambarkeeda 'J2' adeegyada Etihad Airways ee u dhexeeya Baku iyo Abu Dhabi.
Wadashaqeyntan dhexdeeda, martida Azerbaijan Airlines waxay awood u yeelan doonaan inay ballansadaan duulimaadyada cod-bixiyaha ee tagaya ama tagaya Abu Dhabi waxayna ku xirmi doonaan shabakadda ballaaran ee caalamiga ah ee Etihad Airways.
Jahangir Asgarov, Madaxweynaha Azerbaijan Airlines CJSC, wuxuu yiri: “Azerbaijan Airlines iyo Etihad Airways waa shuraako soo jireen ah oo duulimaadyada rayidka ah. Bilaabista duulimaadyada wadajirka ah ee udhexeeya labadeena diyaaradood waxay u oggolaan doontaa muwaadiniinta Azerbaijan in ay sii ballaariyaan marin kooda adduunka, soo jiidashada tirada dalxiisayaasha oo kordhay iyo in fursado badan loo abuuro dadka safarka ah ee ganacsiga.
Shirkadda Etihad Airways ayaa u magacowday Saeed Mohammad Ahmed inuu noqdo Maareeyaha Dalkeeda Azerbaijan. Muwaadin u dhashay Imaaraadka, waa nin khibrad u leh duulista oo doorkiisii ​​hore ee diyaaradda uu ahaa Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay Chicago. Booskiisa cusub wuxuu mas'uul ka noqon doonaa istiraatiijiyadda iyo guusha ganacsiga ee wadada cusub, iyo horumarinta xiriir ganacsi oo lala yeesho shirkadaha muhiimka ah ee Azerbaijan iyo warshadaha safarka.
Duulimaadka saddex jeer usbuucii iyadoo la adeegsanayo 136-kursi oo Airbus A320 ah, oo loo qaabeeyey 16 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 120 oo ah Qaybta Dhaqaalaha, duulimaadyada cusub waxay shaqeyn doonaan Arbaco kasta, Jimcaha iyo Sabtida, iyagoo siinaya waqtiyada ugu habboon ee dharaartii martida tagaya iyo kuwa imanaya Abu Dhabi iyo Baku. Jadwalku wuxuu bixiyaa isku xirnaan ku habboon kana imanaya shabakadda caalamiga ah ee diyaaradda waxaana si isku mid ah loo muddeeyay usbuuca oo dhan si loo bixiyo isku-darka dhammaadka usbuuca, joogista gaaban iyo fursadaha safarka ganacsiga.